အတွင်းသား​တွေ ​ပေါ်လွင်​​နေတဲ့ ဖက်​ရှင်​နဲ့ စင်္ကာပူမှာ ကဲ​နေတဲ့ သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေး - Real News
Home Cele News အတွင်းသား​တွေ ​ပေါ်လွင်​​နေတဲ့ ဖက်​ရှင်​နဲ့ စင်္ကာပူမှာ ကဲ​နေတဲ့ သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
အတွင်းသား​တွေ ​ပေါ်လွင်​​နေတဲ့ ဖက်​ရှင်​နဲ့ စင်္ကာပူမှာ ကဲ​နေတဲ့ သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
Htet Moe Thu
စွဲမက်​ဖွယ်​​ကောင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်​​ကောက်​​ကြောင်းအလှကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားတဲ့ မင်းသမီး​ချော​လေး သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​က​တော့ လှပတဲ့ရုပ်​ရည်​နဲ့ ချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့ စိတ်​ထားကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားသူ​လေးပါ။ အမြဲလိုလို ညှို့အားပြင်းပုံရိပ်​​တွေကို ပရိသတ်​​တွေဆီ ချပြ​လေ့ရှိတဲ့ သင်​ဇာက​တော့ လတ်​တ​လောမှာလည်း ​စင်္ကာပူသို့ အလည်​အပတ်​​ရောက်​ရှိ​နေတဲ့ သူမရဲ့ ဗီဒီယို​လေးကို လူမှုကွန်​ယက်​မှာ ထုတ်​ပြလိုက်​တာ​တွေ့ရပါတယ်​။ အတွင်းသားအလှ​တွေ အထင်းသားမြင်​​နေရတဲ့ သင်​ဇာ့ရဲ့ဗီဒီယိုက​တော့ အရမ်းကိုမိုက်​​နေတာပါ​နော်​။
မိုမို​လေးချစ်​ပရိသတ်​​တွေအတွက်​​ ​ အတွင်းသား​တွေ ​ပေါ်လွင်​​နေတဲ့ ဖက်​ရှင်​နဲ့ စင်္ကာပူမှာ ကဲ​နေတဲ့ သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။
သင်ဇာကတော့ Gym ကို ပုံမှန်ကစားဖြစ်တာကြောင့် အဆီပိုမရှိ ကျစ်လစ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပြီး ဘာလေးဝတ်ဝတ် ချပ်လျပ်ပြီး ကြည့်ကောင်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စွဲမက်​ဖွယ်​ အတွင်းသားအလှ​တွေ ​ပေါ်လွင်​​နေတဲ့ သင်​ဇာ့ရဲ့ဗီဒီယို
အနက်​​ရောင်​ ဖက်​ရှင်​​လေးနဲ့ ညို့အားပြင်းလွန်း​နေတဲ့ သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​ရဲ့ ဗီဒီယို
သရုပ်​​ဆောင်​ပိုင်းမှာလည်း ကျရာဇတ်​ရုပ်​ကို ပီပြင်​​အောင်​ သရုပ်​​ဆောင်​နိုင်​တဲ့ သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​က​တော့ လက်​ရှိမှာ ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားကြီး​တွေ ဆက်​တိုက်​ ရိုက်​ကူးဖြစ်​​နေပြီး တစ်​ခြား​သောအနုပညာအလုပ်​​တွေလည်း လုပ်​ဖြစ်​​နေတယ်​လို့ သိရပါတယ်​။ ခရီးသွားရတာကို ဝါသနာပါတဲ့ သင်​ဇာ​လေးက​တော့ မကြာခဏဆိုသလို ပြည်​တွင်းပြည်​ပ​နေရာအစုံ ခရီးထွက်​​လေ့ရှိပါတယ်​။ မိုမို​လေးချစ်​ပရိသတ်​​တွေလည်း စင်္ကာပူမှာ အလန်းကြီးလန်း​နေတဲ့ သင်​ဇာ့ကိုချစ်​ရင်​ share ​သွားကြဖို့ မ​မေ့ပါနဲ့​နော်​။
Source:Thinzar Wint Kyaw’s Instagram
Previous articleမေလ ၂၁ ရက် နောက်ပိုင်းမှသာ မုတ်သံလေ ဝင်ရောက်နိုင်ဟု ဦးထွန်းလွင်ပြောပြီ
Next articleတံတားဆောက်သော သစ်ဖိုးငွေ မပေးချေးလို့ဆိုပြီး သစ်ကုန်သည်မှ တံတားကို မီးရှို့
ကမ်းခြေမှာ ဆော့ကစားရင်း ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ လွင်မိုးတို့ မြေးအဖိုး နှစ်ယောက်
ကျွန်တော်လိုပဲ ငတ်မှာစိုးလို့ သားသမီးတွေကို အနုပညာအမွေ မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ထင်ကျော်
သီချင်းဆို​နေတုန်း ​ရုတ်​တရက်​ ​ကျောင်းသူ​အုပ်​စုလိုက်​ကြီးရဲ့ ​ပြေးဖက်ခြင်း​ကို ခံလိုက်​ရတဲ့ G Fatt ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
အသက် (၇၂) နှစ်ရောက်မှ အကယ်ဒမီ အတွက် စပွန်ဆာရဖူးတယ်လို့ ဖွင့်ဟလာတဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကျောင်းသင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ကြားပို့ချပေးနေသော သြစတြီးယားနိုင်ငံ ဗစ်တိုးရီးယားမြို့လေး
ဒေါင်းတိ်ု့မျိုးဆက်သံချပ် အဖွဲ့မှ တပ်မတော်အား ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် အလုပ်မလုပ်ပါကဂုဏ်သိက္ခာ တည်ဆောက်စရာမလိုဟု ထောက်ပြ
စင်ကာပူရှိ ငွေလဲကောင်တာ ၁၈ ခုကနေ ကျပ် ၁၀၀၀၀ တန် အတုများဖမ်းဆီးရ
မူးယစ်ဆေးဝါး သယ်ဆောင်သူ ကျောင်းသားနဲ့ စေခိုင်းသူ ကျောင်းအုပ်ဆရာတို့ကို ဖမ်းဆီးမိ
အဆိုတော် သီရိဆွေ တို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိသားစု
သက်တော် ၁၀၂ နှစ်ရှိ သက်တော်ရှည်ရခိုင်ဆရာတော် ဦးပညာသာရ
ဒယ်အိုးနီ သုံးတတ်တဲ့လူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ဒယ်အိုးနီ အန္တရာယ် အကြောင်း
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် ငြိစွန်းခြင်း ရှိ မရှိ စောင့်ကြည့်နေဟု ကော်မရှင်ပြော
အသက် (၄)နှစ်အရွယ်ကလေး အဘိုးကြီးရုပ်ပေါက်ရတဲ့အကြောင်း
ဘုရားရှင်အား တစ်ကြိမ် ဦးချရခြင်းအကျိုး မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဖတ်ပါ အများအတွက်လည်း မျှဝေပေးခဲ့ပါ
နိုင်ငံသားတိုင်း မဖြစ်မနေ သိကိုသိထားရမယ့် မြေအရောင်းအဝယ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပုံ အဆင့်ဆင့်
ထိုင်းဘုရင်ရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မှာ မြန်မာအကျဉ်းသားတွေလည်း ပါဝင်လွတ်မြောက်
Htet Moe Thu - September 21, 2019
မိန်းမနှစ်ယောက်ရှိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် နောက်တစ်ယောက်ထပ်ယူဖို့ရှာနေတဲ့ အမျိုးသား
Myanmar News Now News Website isaDaily News Blog and We provides Latest Local and International News, Breaking News, Celebrity News and Life Style. Articles are Display in Both Zawgyi and Unicode Text, Videos and Photos.
Contact us: contact@realthadin.com
© Copyright © Real News
တကယ်တန်း ဘဝမှာ ဘယ်သူကတော့ နာမည်ပျက်ချင်တဲ့ သူတော့ရှိမလဲဆိုပြီး ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ ဝိုင်းစု
လူပျိုကြီး ဘဝ ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ ရှာတွေ့ထားပါပြီ လို့ ပရိသတ်ကိုအသိပေးခဲ့လိုက်တဲ့ ပရဟိတမင်းသားကြီး ဝေဠုကျော်